Vaovao - Maninona no mifidy Compressor Global-Air Air?
Maninona no mifidy Compressor Global-Air Air?
Maninona no mifidy Compressor Global-Air Air? Ny mpanjifa rehetra dia miahy ny teboka telo amin'ny vokatra dia ny vidiny, ny kalitao ary ny serivisy aorian'ny fivarotana.
Mikasika ny vidiny, dia mamokatra vokatra afovoany avo lenta izahay, ary mampiasa singa avo lenta eny an-tsena, ka tsy mampitaha amin'ny marika ambany amin'ny vidiny izay tsy manana kalitao tsara ny compressors. Raha mampitaha an'i Altas, Ingersoll Rand ary marika malaza hafa isika dia mazava ho azy ny tombony.
Raha ny kalitao dia namokatra compresseur mihoatra ny 20 taona izahay, manana fanaraha-maso henjana, fizahana fizahana ary fizahana fanaraha-maso mivoaka, manaraka ny fifehezana kalitao 5S izahay, ary nandalo fanamarinana kalitao ISO9001 ary manome fiofanana tsy tapaka ho an'ny mpiasa ihany koa. Nalefa tany amin'ny firenena 90 manerana an'izao tontolo izao mandraka ankehitriny izahay ary nahazo laza tsara momba ny kalitaon'ny vokatra ary nahazo mpanjifa mahatoky be dia be.
Raha ny serivisy aorian'ny varotra dia manana ny haitao mandroso indrindra hamokarana ny vokatray izahay. Ny vokatra rehetra dia dinihina 100% alohan'ny fandefasana. Manome fanampiana 24/7 amin'ny ekipa efa za-draharaha izahay. Manome fiofanana sy torolàlana amin'ny fametrahana ho an'ny mpanjifantsika koa izahay. Izahay dia miasa amin'ny fananganana Ivotoerana Serivisy Alàlana any amin'ny firenena rehetra hanomezana tolotra matihanina sy mahomby ho an'ny mpanjifantsika isan'andro. Ny serivisy eo an-toerana dia afaka manome izany amin'ny alàlan'ny teknisiana anay na ny Ivotoerana Serivisy alàlana eto an-toerana.
Amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny Global-air, dia nifidy vokatra vita tsara sy voarindra tsara avy amin'ny orinasa manana traikefa efa ho 20 taona eo amin'ny sehatry ny indostria ianao.